कस्ता व्यक्तिको यौनजीवन सुखमय हुन्छ ? |
कस्ता व्यक्तिको यौनजीवन सुखमय हुन्छ ?
यौनसुख सबैले समान रुपमा भोग गरिरहेका हुँदैनन् । कतिपयको यौन जीवन दुखदायी हुन्छ, कसैको रोमाञ्चक । कसैले यसबाट चरम सन्तुष्ट प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्, कसैले असन्तुष्ट ।
मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको साथमा यौन स्वास्थ्य पनि सहि हुन आवश्यक छ ताकी आफ्नो जीन्दगीलाई राम्रो तरिकाले जिउन सकियोस् ।
यदि तपाईंको यौन स्वास्थ्य राम्रो छैन भने यसैको कारण तपाईंको जीवनमा अन्य समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । यसैकारण तपाईंले आफ्नो यौन स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको लागि केही तरिका अपनाउनु पर्छ ।
यी बानीहरुलाई अपनाएर तपाईं पनि आफ्नो यौन जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ । आउनुहोस् जानिराखौं सुखी यौन जीवन जीउने जोडीहरुको कुन कुन बानी हुन्छन्ः
तपाइर्ंले यौन सम्बन्धको क्रममा आफ्नो पार्टनरलाई किस गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । तर, सुखी यौन जीवन जिउने मानिसहरु विनाकारण र दिनको जुनसुकै समयमा जब आफ्नो पार्टनरको साथमा हुन्छन त उनीहरुलाई किस गर्ने मौका छोड्दैनन । यसले तपाई आफ्नो पार्टनरलाई आफूले कति ख्याल गर्नुहुन्छ त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ ।
अध्ययनका अनुसार जुन दम्पतीले आफ्नो घरको काम बाँड्छन् र आफ्नो पार्टनरको कामलाई पुरा गर्न उनीहरुको मद्धत गर्छन त्यस्ता जोडीको यौन जीवन सुखद हुने देखाएको छ ।